Kuthiwani uma inyoka iphupha ngenyoka emanzini, inyoka emnyama
Ukuchazwa kwamaphupho lapho wabona khona inyoka.
Njengoba inyoka ibhekwa njengophawu lokuhlakanipha phakathi kwezizwe eziningi, umuntu kufanele alindele okuthile okubalulekile ekubukeni kwalesi silwane ephusheni. Uma ubheka ebhukwini lethu lephupho, ungakwazi ukulungisa kahle umbono wakho ebusuku, ukukhumbula imininingwane yayo kusengaphambili.
Inyoka iphupha ngani?
Ungakhathaleli nje kuphela ubuhlungu bezinyoka ezibonwe ephusheni, kodwa nasembala walo.
Funda ngalokho amaxoxo aphupha ngakho lapha .
Uma iphupho le-cobra, qaphela ukuziphatha kwesigamu sakho sesibili. Mhlawumbe umyeni wakho noma umkakho ufihle okuthile, noma ngabe uxhumano ohlangothini.
Inyoka enkulu enamandla, efana ne-boa constrictor noma i-python, amaphupho uma kwenzeka esikhathini esizayo esiseduze umuntu uboshwe yizimpi zokuphila kanye nobunzima. Ngaphezu kwalokho, umuntu kufanele azame ukungena ezimweni ezibuhlungu, ngoba i-python ephusheni ingabuye ibe isixwayiso mayelana nokulimala okungenzeka.
Qinisekisa ukuphawula ukuthi uzizwa kanjani empilweni: Ukuphelelwa yithemba kuletha isipiliyoni esivela enhliziyweni empeleni, injabulo - abajwayele ukuxhumana nabo, ukuzola kusho isikhathi sokuphila okunethezeka.
Iqembu lezinyoka lithembisa ukufika kwezihlobo, lowo lowo mphupho awunabo ubuhlobo obuhle kakhulu. Uma ebavuma ngenhlonipho, khona-ke kukhona inzuzo engaba khona kanye nezinzuzo ezengeziwe kulokhu kuxhumana.
Encwadini yephupho, izinyoka zifanekisela ngokuqondile umsebenzi wakho. Uma ubona ngokucacile amabala aphuzi ekhanda lesilwane, zonke izinkinga ezincane zizodlula maduzane. Uma ungaqiniseki ukuthi ubone lezi zimpawu, udinga ukuqapha kakhulu emazwini akho amahle mayelana nabaphathi endaweni engasebenzi.
Kuzokwenzekani uma inyoka iphupha ngamanzi?
Ngokusho kokuhumusha, inyoka yamanzi ibonisa ulwazi lwangasese. Umuntu obonile iphupho elinjalo angenza ukutholakala okuphawulekayo futhi athole udumo lomhlaba. Kodwa kukhona ezinye, ukuhumusha okuqondile kakhulu.
Uma ubona inyoka emanzini, ungaqiniseka ukuthi lokhu kuyinto engalungile ngokuphelele. Ixwayisa umphuphi ukuthi usanda ukwenza isinqumo esingalungile, ethemba abantu abangalungile.
Uma egibela emanzini, qaphela ngokwengeziwe indawo yakho. Cishe, abazenzisi noma abantu abanomona bavele lapho.
Ukubhukuda kanye nezinyoka emfuleni noma enye echibini kusho ukuthi ukulindela kwezenzakalo ezimnandi ngeke kulungiswe futhi ukudumazeka kuzokwehlela.
Ukuze ubone emanzini ahlanzekile inyoka ithi izitha zakho azifuni ukulimaza kuphela isikhundla sakho enkonzweni, kodwa futhi nokuphila kwakho.
Isilwane esihamba kancane kancane ngaphansi kwamanzi bese sihamba ngaphansi kobunzima be-liquid kuyinto uphawu oluhle kuphela. Uthembisa ukuthuthuka emkhakheni wezemfundo ngisho nokuthuthela endaweni entsha yokuhlala.
Ukuchaza kahle iphupho lapho ubona izinyoka ezinemibala, kungasiza ukuvimbela izingozi noma ukuthatha izinyathelo zokunqoba izinkinga zokuphila ezizayo.
Inyoka ebomvu endaweni ethile emvelo ibonisa uhambo olusheshayo olusheshayo; futhi endlini - kusho isixwayiso ngengozi: kufanele uqaphele ngokwengeziwe impahla yakho ezokuthutha nasemgwaqweni, ngoba ungabanjwa
Uhlaza okwesibhakabhaka uthembisa umphuphi ukuphumula okumnandi nokuphumelela ekugembula
I-Grey iyisixwayiso ukuze umuntu angasebenzisi imali eningi, njengoba lokhu kungaholela ezinkingeni ezinkulu zezimali esikhathini esizayo
Ngokuvamile, ukuhumusha okuningi ukuphupha kuthatha amaphupho avamile mayelana nezinyoka njengamahlumela ezishintshayo empilweni. Umphuphi angakwazi ukuthola ifa elimangalisayo ngokuzumayo noma ukuthuthukisa isimo sakhe somphakathi. Kodwa ngenxa yalokhu, amaphupho kumele afike ngokujwayelekile.
Izinkinga zenyanga yokuqala yokuphila kwengane
Sebenza ekhaya: izinzuzo nezingozi
Umama webhizinisi angabhubhisa kanjani "ubunzima bomama"?
Usayizi awunandaba: Liechtenstein kanye nezikhangayo zayo
Ukukhathala kwe-Eye kusuka kwikhompyutha
Ukudla kudla ngobuncane
Izifiso ezijabulisayo ngoFebhuwari 23, osebenza nabo besilisa - Abafushane bahalalisela izingane ezifunda nabo nge-sms, evesini nasesipelini ngamagama abo